မြန်မာ-ဂျပန် project မှာသင်တဲ့ ebook — MYSTERY ZILLION
မြန်မာ-ဂျပန် project မှာသင်တဲ့ ebook
September 2009 edited October 2010 in Java
ကျွန်တော့်မှာ၇ှိတဲ့ ဂျာဗား စာအုပ်လေးပါ
အတော်လေးကောင်းတယ်ဗျာ edit by union of Myanmar ဆိုပေမဲ့ အထင်မသေးနဲ့ ဗျာ
ခုသင်တန်းတွေမဖွင့်ခင် သင်တန်းမှာပို့ချမဲ့ ဆ၇ာမတွေကို 1 နှစ်လောက်သင်သန်းခေါ်ပေးတုန်းကသင်တဲ့ course ပါ။ တော်တော်လေးလဲ ရှင်းတယ်
သူက နေ့အလိုက်ကို အပြတ််သင်ထားတာဗျ
လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ j2ee ၊ uml ၊ jsp ၊servletစာအုပ်တို့တော့နောက်မှတင်ပေးတော့မယ် အဲဒါတွေက ကျွန်တော်လဲလေ့လာတုန်းဗျ သိပ်နားလည်သေးဘူး ထွင်ပဲထွင်နိုင်ကျလွန် ဗျာ :106::106:
ဟုတ်ကဲ့ရှိသေးရင်မြန်မြန်လေးထပ်ပေးပါ... စောင့်ယူနေပါတယ်... :d
တင်ပေး........ရ၀ူး ခုတင်ပေးနော်။ မတင်ဘူးလား တင်မှာလား၊ တင်ရင် တယ်မယ်ပြော၊ မတင်ရင်မတင်၀ူးပြော၊ တင်သလိုလို မတင်သလိုလိုမလုပ်နဲ့၊ တင်မယ်ပြောပြီးမတင်တာမလုပ်နဲ့၊ တင်ကိုတင်ပေး၊ နင်မတင်ရင် အိမ်လိုက်ယူမှာနော :d:d:d
တင်တော့ မပေးနိုင်ပါဘူး ဗျာ ဒါလေးရှိတာ အီးဘုတ်တော့ အွန်လိုင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်မယ်
အိမ်လိုက်၇ဲ လိုက်ကြည့်လိုက်လေ ဟဲဟဲ ဆီဒိုးနားမှာပြိုင်ပွဲသွား၀င်ခိုင်းပစ်လိုက်မယ် ဟင်းးးးးးးးးးးး
တင်တော့ မပေးနိုင်ပါဘူး ဗျာ ဒါလေးရှိတာ
အဲ.......ကျနော်ပြောတာ အပ်လုပ်တင်တာကိုလေ........လူဂျီးနော် :2:
အိမ်လိုက်၇ဲ လိုက်ကြည့်လိုက်လေ ဟဲဟဲ
အမလေး လိုက်ရဲပါဘူးတော် အဲမှားလို့ ဗျာ။ တားတားကြောက်ကြောက် :5:
သည်းခံလော့ ဒကာတော် ယခု အကျွန်ုပ်ေ၇ာက်နေသည် ကားမြန်မာပြည်ဖြစ်သောကြောင် စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါနိုင် တင်ချင်သော်လဲ အင်တာနတ်ကြီး ကိုပူဇော်ရဦး မည် :d:d
မကြောက်ပါနဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင် ဘောင်းဘီချွတ်တာ ၀ါသနာပါလို့ အဲ ဟုတ်ပေါင် ရေချိုုးမလို့ပါ
ဒါကတော့ အွန်လိုင်းက ၇ထားတဲ့ ဟာ ဟာ
ဂျပန် ပရောဂျက် ဟာေ၇ာပေါ့ဗျာ
အောက် မှာယူလိုက်ပါတော့ နော်
j2ee စလေ့လာမဲ့ သူများအတွက် သင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ
database and uml design ,security စာအုပ်တွေက ဘယ်ဖိုဒါထဲေ၇ာက်နေတယ်မသိဘူးဗျာ
ကျွန်တော်ကလဲ နာမည်တွေမမှတ်ဘူး ဗျ သူတို့က S-SD တွေနဲ့ course ကို ခွဲခြားမှတ်သားထားတော့ မေ့နေတယ်ဗျာ သူတို့သင်တန်းနာမည်ပေးထားကြတယ်ထင်ပါတယ်
http://www.mediafire.com/file/qnifkwuwwdg/My choice J2EE.pdf
အသင်.အား အလွန်ပင် ကျေးဇူးတင်မိလေသည် အဆွေတော်:d:6::p
u afraid , aren't u?
i will inform ICTTI' japan,
har har ... ,makeafun.
Thanks you very much brother..
Pls give me the another link of teach of Myanmar - Japan project.
can u give me these ebook again..links is not working....very useful for me...thx for ur sharing
ပြန်တင်ပေးပါအုန်း ဗျာ ဖိုင်ကမရိႈတော့လို့ပါ
Please read the whole discussions carefully. There is2more Mediafire links. These are working fine.
Yes, though http://www.mediafire.com/file/qnifkwuwwdg/My choice J2EE.pdf, this link is working, http://www.mediafire.com/?ljznmxrgztz, that one for Java is not working.
Please check for us.
Find "ဒီမှာ" within former discussions, there will be another link. I think that one contains Java. If it does not include, I could not help, I did not see royal7 for quite long time.
Thank you, CalmHill.
Down လို႔မရဘူးခင်ည ဟင့်
This thread is too old, some of the files might be removed by the hosting.